/blog/gallery/Otu esi eji Trenbololone Ntụziaka na-ejikọ Trenbolone Enanthate Powder 2019
Ihe na 05 / 21 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Kedu ihe bụ Trenbolone Enanthate?
Trenbolone E (Trenbolone enanthate) bụ otu n'ime steroid nke nwere ike ịmepụta dịka ihe mgbakwunye ndị nwere ike itinye na nsị ahụ. Ọ bụ ezie na e ji ya mee ihe mbụ ahụ ike na ụmụ anụmanụ, ihe ọ na-achọ n'etiti bodybuilders amụbaala kemgbe ọtụtụ afọ n'ihi na ọ dị irè na uto ahụ.
Tren E (Trenbolone enanthate) bụ ụdị nke trenbolone kachasị dị ogologo ma nwee ogologo oge absorption. N'ihi ya, ọnụego ọ na-esi n'ahụ ya pụọ ​​bụ ngwa ngwa. Ọ nwere ọkara ndụ nke ụbọchị iri na abụọ, nke mere ka ọ belata oge kacha elu. Otú ọ dị, ọkara ọkara dị ogologo, na-eme ka ọ bụrụ ihe kachasị njọ.
Olee otú jiri trenbolone uzommeputa ka mix trenbolone enanthate ntụ ntụ
Efrata ị chọrọ ịkwadebe
Trenbolone Enanthate uzommeputa
100mg / mL Trenbolone Enanthate uzommeputa maka 100mL
10g Trenbolone Enanthate ntụ ntụ (7.5mL)
5mL mmanụ dị ọcha
22um Syringe iyo
3mL na 20mL / 60ML syringe nwere mkpịsị nlele 18-21
A na-esi nri
Ọtụtụ obere akwụkwọ
Nọmba dijitalụ (+ -0.1 ma ọ bụ 0.01)
Trenbolone Enanthate homebrew nzọụkwụ site nzọụkwụ
-Step 1: Kpoo steroid trenbolone enanthate ntụ ntụ
-Step 2: Tinye trenbolone ntụ ntụ, BA, na BB n'ime beaker
-Step 3: Kpoo beaker n'ime mmiri ịsa ahụ
-Step 4: Tinye mmanụ grapeseed
-Step 5: Nzacha
-Step 6: Gbanyụọ ha ka ha gbanye mgbapụ
Nzọụkwụ 1: Kpoo steroid trenbolone enanthate powder
Jiri trenbolone enanthate uzommeputa mee ka trenbolone enantahte mmanụ, nke mbụ ị ga-ewe bụ ịtụle Trenbolone Enanthate ntụ ntụ ke beaker iko. Gbaa mbọ hụ na ị ga-emezigharị ihe ziri ezi mgbe ị na-eme ihe iji zere inwe ọtụtụ ma ọ bụ obere nke Tren Enanthate.
Kwụpụ 2: tinye Trenbolone ntụ, BA, na BB n'ime beaker
Tinyere Benzyl Benzoate (BB) na Benzyl mmanya na-aba n'anya (BA) ma bido. The raw Trenbolone amalite igbatu na ntụ ntụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ngwa ngwa nke usoro ahụ, hụ nzọụkwụ 3.
Kwụpụ 3: Kpoo onye beaker n'ime mmiri
Ịkpọ nkụ beaker na mmiri ịsa ahụ na-eme ka usoro ahụ dịkwuo elu. Mmiri ekwesịghị ịdị ọkụ, ka ọkụ dị ọkụ n'ihi na okpomọkụ dị elu nwere ike iduga nchịkwa.
Kwụpụ 4: Tinye mmanụ grapeseed
Gbakwunye mmanụ ọka chara chara na ngwakọta ma jikọta ya nke ọma. Jide n'aka na enweghi swirls ọ bụla tupu ịkwaga usoro nhazi. Gbaa mbọ hụ na ala nke beaker ahụ na-egosi n'ụzọ doro anya Trenbolone Enanthate ngwọta.
Kwụpụ 5: nzacha
Debe ihe ngwọta na nnukwu sirinji ma ọ bụ obere (nke a ga-emeghachi ugboro ugboro). Jikọta ntan na agịga na sirinji ma gbanye n'ime vial.
Gaa ngwọta site na ntinye sirinji n'ime vial site na itinye ụfọdụ nrụgide na ya. Ejila otutu nrụgide mee ihe n'ihi na nke a nwere ike kewaa nsị sirinji ma ị nwere ike ịgwụ na ọgba aghara.
Ọ bụrụ na ị chọpụta na usoro nzacha ahụ adịghị ngwa, ị nwere ike ịgbanwe ntụgharị sirinji oge ọ bụla ị na-eme nzacha 40ml
Kwụpụ 6: Kpochapụ ha na-agbapụ isi
Ozugbo i mere usoro ntinye, gbanye ngwọta.
Na Nchịkọta, Trenbolone e homebrew usoro dị ka e kwuru n'elu, nzọụkwụ mbụ ị na-ewere bụ ịtụle Trenbolone Enanthate ntụ ntụ na iko iko beaker ma gbakwunye Benzyl Benzoate na Benzyl mmanya na-aba n'anya (Ị nwere ike ịzụta trenbolone enanthate ntụ ntụ site na ụfọdụ steroid ntụ ntụ soplaya). Na raw Trenbolone amalite igbatu na ntụ ntụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbatị usoro, ị nwere ike ikpo ọkụ beaker na mmiri ịsa ahụ. Mmiri ekwesịghị ịdị ọkụ ma dị ọkụ n'ihi na okpomọkụ dị elu nwere ike iduga nchịkwa.
Gbakwunye mmanụ ọka chara chara na ngwakọta ma jikọta ya nke ọma. Jide n'aka na enweghi swirls ọ bụla tupu ịkwaga usoro nhazi. Debe ihe ngwọta na nnukwu sirinji ma ọ bụ obere (nke a ga-emeghachi ugboro ugboro). Jikọta ntan na agịga na sirinji ma gbanye n'ime vial.
Ọ bụrụ na ị chọpụta na usoro nzacha ahụ adịghị ngwa, ị nwere ike ịgbanwe ntụgharị sirinji oge ọ bụla ị na-eme nzacha 40ml. Ozugbo emere gị ihe ngwọta.
Trenbolone Enanthate uru
Nke a bụ ole na ole Trenbolone Enanthate uru ọ na-eweta na tebụl ozugbo ị kpebiri iji ya.
-Onye na-enye ọganihu ngwa ngwa ngwa
-Ikwu maka igbutu
- Mee ka njigide nitrogen jide
-Gabaa ogo cortisol n'ime ahu.
-Abanye na abụba ọnwụ
Ọ na-enye ọganihu ngwa ngwa
Iji Trenbolone Enanthate bụ ụzọ magburu onwe ya iji nyere gị aka ịmara ike gị zuru oke ma ọ bụrụ na ị na-agụsi agụụ ike inweta ọganihu ahụ ngwa ngwa.
Ezi maka ịcha
Trenbolone Enanthate O doro anya na ọ ga-enyere gị aka belata mgbe ị na-enwe ike ịkwa ụbụrụ mgbe ị na-egbu oge.
Mee ka njigide nitrogen dị
N'adịghị ka ụfọdụ ndị steroid bụ ndị nkwonkwo ụbụrụ ha na-esi na njigide mmiri, uru Trenbolone Enanthate bara uru bụ n'ihi uto nke nitrogen, nke na-eduga n'inwe ahụ ike na-adịgide adịgide.
Dezie ogo cortisol ahụ.
Trenbolone Enanthate na-achịkwa ego cortisol mere si otú a na-amụba mgbake na ọgwụgwọ na-agbakwunye ume ha n'oge mmega ahụ.
Nyere aka na nha
N'oge ọzụzụ, ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-ahọrọ iji nke a dị ka isi iyi nke ike kama ịṅụ starch nke nwere ike iduga uru bara uru.
Ịbụ na ndepụta nke ike ndị steroid, Trenbolone Enanthate kwesịrị ịbụworị otu n'ime ndị steroid kachasị amasị gị. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịmalite iji ya, nke ahụ ekwesịghị ichegbu onwe gị. Ị nwere ike kpebie ịme ya ma ọ bụ zụta Trenbolone Enanthate online.
Anabolic Steroids na Ime ha, Prọfesọ Frank, peeji nke 1-47
Anabolics nke ala, William Llewellyn, Ronny Tober
2019 Otu esi eme ka testosterone enanthate homebrew na nzọụkwụ 6	DECA ntụ ntụ-Nduzi Ntuzi Olee otú Mee Nandrolone Decanoate (Durabolin)